Thenga umgubo we-Orlistat (96829-58-2) hplc≥98% -I-Wisepowder
I-Orlistat powder, ekwabizwa ngokuba yi-Xenical okanye i-Alli. I-Orlistatt powder yenzelwe ukunyanga ukukhuluphala kunye nokunceda ukunciphisa umzimba. Umsebenzi wayo ophambili kukuthintela ukufakwa kwamanqatha kukutya komntu ngokusebenza njenge-lipase inhibitor, ngaloo ndlela kunciphisa ukubamba kwe-caloric. Yenzelwe ukusetyenziswa ngokudibeneyo nomboneleli wokhathalelo wezempilo-ogadwe yinciphisa-ikhalori yokutya.
I-Orlistat powder (i-96829-58-2) ividiyo
I-Orlistat powder (96829-58-2) Ulwazi olusisiseko
Igama leKhemikhali Orlistat
Iintetho ezifanayo I-Tetrahydrolipstatin
I-Molecular Formula C29H53NO5
Ubomi obulicla Iiyure ezi-1-2
Umzimba Ukunyibilika kwamanzi: Ngokukodwa ngokunganyibiliki
isicelo Sebenzisa ukunciphisa umzimba okanye uneengxaki zonyango ezinxulumene nobunzima
I-Orlistat powder (96829-58-2) Inkcazo ngokubanzi
I-Orlistat powder sisiyobisi esenzelwe ukunyanga ukukhuluphala. Kuthengiswa njengeyeza elikhuselweyo njengelichiza phantsi kwegama lokurhweba ngeXenical nguRoche kumazwe amaninzi, kwaye kuyathengiswa ngaphezulu kwikhawuntara njengeAlli nguGlaxoSmithKline e-United Kingdom nase-United States.Its Umsebenzi oyintloko ukuthintela ukufakwa kwamafutha ku Ukutya komntu ngokusebenza njenge-lipase inhibitor, ngaloo ndlela kunciphisa umthamo we-caloric. Yenzelwe ukusetyenziswa ngokudibeneyo nomboneleli wokhathalelo wezempilo-ogadwe yinciphisa-ikhalori yokutya.
I-Orlistat powder sisithambiso esigciniweyo se-lipstatin, inhibitor yendalo enamandla e-pancreatic lipases esekwe kwi-bacterium Streptomyces toxytricini.However, ngenxa yobulula bayo kunye nokuzinza, i-orlistat powder yakhethwa ngaphezulu kwe-lipstatin yokuphuhliswa njengechiza elichasene nokukhuluphala.
I-Orlistat powder (96829-58-2) Imbali
I-Orlistat powder isetyenziselwa ukunceda ukunciphisa umzimba, okanye ukunceda ukunciphisa umngcipheko wokubuyisa ubunzima esele belahlekile. Eli liyeza kufuneka lisetyenziswe kunye nokutya okunekhalori okuncitshisiweyo. I-Orlistat yeyokusetyenziswa kuphela kubantu abadala.
I-Orlistat powder (96829-58-2) I-Mechanism of Action
I-Orlistat powder yinto eguqukayo enhibitor ye-lipases. Inika umsebenzi wayo wonyango kwi-lumen yesisu kunye namathumbu amancinci ngokwenza umdibaniso odibeneyo kunye nendawo esebenzayo ye-serine ye-gastric kunye ne-pancreatic lipases. Ii-enzymes ezingasebenziyo azifumaneki kumanqatha okutya e-hydrolyze ngendlela ye-triglycerides kwii-acids zamafutha asimahla kunye ne-monoglycerides. Njengoko i-triglycerides engafakwanga ingafakwanga, umphumo wekhalori onesiphumo unokuba nefuthe lokulawula ubunzima.
I-Orlistat powder (96829-58-2) Isicelo
I-Orlistat powder isetyenziswe ngovavanyo oluvunyiweyo ngugqirha, utshintsho lokuziphatha, kunye nenkqubo yokutya encinci yeekhalori zokukunceda ukunciphisa umzimba. Isetyenziswe ngabantu abathile abatyebileyo, njengabo batyeba kakhulu okanye baneengxaki zonyango ezinxulumene nobunzima. Ukuthatha i-orlistat kunokukunceda ukuba ungazukubuyisa isisindo esilahlekileyo. Ukuphulukana nobunzima kunye nokuwugcina kude kunganciphisa umngcipheko omkhulu wezempilo oza nokukhuluphala, kubandakanya isifo sentliziyo, isifo seswekile, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, kunye nobomi obufutshane.
I-Orlistat powder (96829-58-2) Olunye uphando
Abantu banokucela "i-Dose Orlistat iyasebenza ngokwenene?".
Ukuba isetyenziswe kunye neqhinga elongezelelweyo lokulahleka kwesisindo, i-Orlistat ibonakalisiwe ukuba iyasebenza ekuncedeni ukunciphisa umzimba.
Olunye uphononongo lufumanise ukuba abantu abathathe i-Orlistat kwaye baqhubeka nokutya okune-calorie ephantsi baphulukene ne-1.25 yelitye (8.1kg) ngonyaka, eyayiyi-6lb (2.8kg) ngaphezulu kwabo bangazange bathathe i-Orlistat ngexesha elinye.
Olunye uphononongo lufumanise ukuba abaguli abangama-743 abatyebileyo abathatha i-Orlistat yokunciphisa umzimba baye baphulukana nomndilili we-10.3kg ubunzima emva konyaka. Oku kuthelekiswa nezigulana ezi-6.1kg ezingathathi i-Orlistat elahlekileyo.
Olunye uphononongo luye lwafumanisa ukuba abantu abalandela le khosi yonyango banokuphulukana ukuya kwi-10% yobunzima bomzimba wabo ngonyaka.
Njengamayeza amaninzi, kukho ezinye zeziphumo ze-Orlistat. Iziphumo eziqhelekileyo ezirekhodiweyo ze-Orlistat zokuthatha i-Orlistat zihlangabezana nentloko.
I-Orlistat powder (96829-58-2) Isalathiso
 I-Orlistat i-120mg capsule blister pack ". TGA. 11 Epreli 2000. Ibuyisiwe nge-18 ku-Epreli 2018.
 JA Menendez; L. Vellon; R. Lupu (2005). "Izenzo ze-Antitumoral ze-anti-obesity drug orlistat (i-Xenical TM) kwiiseli zomhlaza wamabele: ukuvinjelwa kokuqhubela phambili komjikelo weseli, ukukhuthaza ukubhubha kweseli kwe-apoptotic kunye ne-PEA3-mediated transcriptional transcriptional ye-Her2 / neu (erbB-2) oncogene". Izibhengezo zeOncology. 16 (8): 1253-1267. ikhonkco: 10.1093 / annonc / mdi239. IINKCUKACHA:
 ”I-FDA ivuma i-Orlistat yoSetyenziso oluNgaphezulu kweye-Counter” (Imithombo yeendaba). Ulawulo lwezoKutya kunye noLawulo lweziyobisi (FDA). Nge-7 kaFebruwari 2007. Ibuyisiwe nge-7 kaFebruwari 2007.
 USawule, uStephanie (7 ngoFebruwari 2007). "Amachiza okuThoba umzimba athengiswe ngaphezulu kweKhawuntari". INew York Times. Ukufunyanwa kwe-10 kaFebruwari 2007.